Sakafo sy divay - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Tady & Vessels
Tobaka saha lehibe lehibe
T tank oblate
Tanks mifono rivotra
Fiberglass Piping & Fittings
Fiberglass Dual Lamination Products
Fiberglass Namboarina vokatra
Clarifier & Settler
Mpankafy sy mpanam-boninkazo
Fiara fiara sy sambo
Ny vokatra hafa
Fiberglass Grating & Annex
Grating & Cover
Milina fanamafisana ho an'ny tanky sy paipa
Mandrels & Moulds
Rano sy rano fanadiovana
Herin'ny thermal sy ny nokleary
Sakafo sy divay
Fantsakan-tsambo sy kitapo
Fitaovana fiarovana amin'ny kianja fiarovana
Plastika fanamafisana Fiberglass (FRP), amin'ny alàlan'ny fampiasana resins nekena amin'ny fifandraisana mifandray amin'ny sakafo, dia mety ho an'ny fitehirizana, ny fitrandrahana ary ny fanehoan-kevitra amin'ny fitaovana maro toy ny divay, ronono, soja, vinaingitra, rano madio, ny sakafom-pisakafoanana amina sokajy, asidra hydrochloric sakafo ara-tsakafo, famonoana ny ranomasina sy ny rafitra fitahirizana, rafi-pitaterana ranomasina, sns.
Mba hahatonga ny vokatra fiberglass hifanaraka amin'ny sakafo sy ny divay sy ny rano madio, ny fitaovana vita an-tsena azo ampiasaina, indrindra fa ireo resy dia tokony hilazana mialoha. Avy eo, rehefa vita ny fanamboarana lamba vita sy ny fitsaboana alefaso, ny vokatra fiberglass dia azo ampiasaina ho an'ny indostrian'ny sakafo.
Ny Jrain dia mampiasa baoritra voafantina voafantina manokana amin'ny fanamboarana fiara mifono vy sy silos natao hampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo. Ny volonta dia neken'ny FDA ary azo ampiasaina amin'ny orinasa ity. Mba hamenoana ny fenitry ny FDA dia iharan'ny fitsapana ny fifindra-monina mifanaraka amin'ny fenitra ankehitriny amin'ny rano sy ny sakafo maina.
Noho izany ny fiara mifono fibre dia mety tsara amin'ny fitahirizana ny karazan-tsakafo rehetra, anisan'izany ny ranon-javatra toy ny rano, ny soja, ny slurry, ny brine, ny menaka sy ny tavy, ary ny loko toy ny lafarinina, ny sira, ny siramamy, ny kano, katsaka, kakao na gluten , ary koa ho an'ny indostrian'ny biby, ohatra, ho an'ny fitahirizana ny voan-javamaniry, voamadinika, vokatra soja, varimbazaha, molaly, sira, mineraly ary maro hafa.
Ny mpamatsy akora anay dia orinasa tsy fantatra eran-tany:
Resin: Ashland, AOC Alyancys, Swancor Showa, sns.
Fiberglass: Jushi, Taishan, CIPC, Dongli, Jinniu, sns.
Fampitaovana manampy: Akzonobel, sns.
Mba hampandehanana mazava ny fitaovana dia mety ho voafantina amin'ny mpanjifany ny slope na conical ambany.
Ny vokatra fiberglass ho an'ny indostrian'ny sakafo dia miankina amin'ny fitsipika mifehy ny birao momba ny sakafo sy ny fahadiovana. Noho izany dia tokony hiara-hiasa miaraka ireo ekipa mpamorona sy ny fitantanana ary ny famokarana hamaha ireo olana rehetra.
Ny tahan'ny kalitao, serivisy ary ny vidiny dia mety ho toeran'ny matanjaka amin'ity tsena ity.
Miorina amin'ny traikefa ananantsika an-taonany maro izay manompo an'ity tsena ity, Jrain dia afaka mamorona volavolan-dalàna sy kalitao maharitra.
Ny vokatra FRP dia manana tombony betsaka toa izao manaraka izao
No. 1289, Street South Yingbin, Distrika Jizhou, Hengshui, Hebei, Sina
Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP, Famolavola grating, hamolavola, Masinina fanamafisana GRP, Nohavaozina Fiberglass,
Raha manontany momba ny vokatra na pricelist izahay dia avelao ny mailakao aminay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
Midira ny hitadiava na ny ESC hanakatona